Borussia Dortmund oo kaga yaabisay kooxda Manchester United qiimaha Jadon Sancho – Gool FM
(Germany) 04 Mar 2020. Wargeyska “Bild” ee dalka Germany ayaa shaaca ka qaaday qiimaha ay u dejiyeen maamulka kooxda Borussia Dortmund in ay ku fasaxaan laacibkooda reer England ee Jadon Sancho.
19 jirka reer England ayaa magaciisa loola xiriirinayay inuu ka tagayo kooxda Borussia Dortmund suuqa xagaaga ee soo aadan, kaddib markii uu yabooohyo kala duwan ka helay kooxo badan ee ka ciyaara horyaalka Premier League si ay u helaan adeegiisa.
Manchester United ayaa loo arkaa inay aad u xiiseyneyso inay la soo saxiixato da’ayarka heerka caalami ee dalka England Jadon Sancho, waxaana ay sameyn doontaa inta awoodeedu ah si ay u hesho adeegiisa.
Laakiin Wargeyska “Bild” ayaa tilmaamay in maamulka kooxda Borussia Dortmund aysan ogolaan doonin inuu ku baxo Jadon Sancho qiimo ka yar 140 milyan oo euro.
Haddii Man United ay ogolaato lacagtaas, Jadon Sancho wuxuu noqon doonaa da’ayarka ugu qaalisan England, isagoo jebin doono rikoorka Paul Pogba, si uu u noqdo ciyaariyahanka ugu qaalisan Red Devils ee taariikhda.
Waxaa xusid mudan in qandaraaska Jadon Sancho ee kooxda Borussia Dortmund uu dhacayo xagaaga 2022, ilaa iyo haatan weeraryahanka reer England ayaa u ciyaaray naadiga reer Germany 33 kulan, wuxuuna ku guuleystay inuu dhaliyo 17 gool, isagoo sidoo kale caawiyay 18 gool kale.
“Waxaan u diiday tababarka kooxda Barcelona sababtan!” – Ronald Koeman